सुखी र सरल जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् अर्थ व्यवस्थापन « Mero LifeStyle
सुखी र सरल जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् अर्थ व्यवस्थापन
मान्छेले जीवनशैलीलाई सहज बनाउन गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत विभिन्न योजना बनाएका हुन्छन् । यद्यपि, यी सबै पैसासँग जोडिएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा अर्थ व्यवस्थापनको महत्व निकै नै बढ्दै गएको छ । समयमै अर्थ व्यवस्थापन गर्दा भविष्यमा सुखी र सरल जीवन बिताउन सकिन्छ । त्यसो त यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे वित्तिय साक्षरता अभियन्ता इन्दिरा पन्तको सुझाव यस्तो छ :
आफ्नै आर्थिक अवस्था बुझ्ने
सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारी गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईको आम्दानी कति छ ? त्यो बुझुन जरुरी छ । सोहीअनुसार आधारभूत खर्च कटाएर अवकाशपछि आफ्ना लागि जरुरत पर्ने पैसाका लागि अरु कोही कसैसँग भर पर्नु नपरोस् भन्ने धेयका लागि पनि योजना बनाउनु जरुरी छ ।
बचत गर्ने बानी बसाल्ने
आम्दानी भएको रुपैयाँबाट आधारभूत खर्च कटाएर अवकाश जीवनका लागि, कुनै सम्पति जोड्नका लागि वा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बचत गर्नु पर्छ । बचत सजिलै गर्न सकिँदैन तर बचतको लागि दैनिक कार्य गरे जस्तो बानी बसाल्नुपर्छ । जुन विस्तारै परिवारमा एउटा बचत संस्कृति बन्न सक्छ ।
आम्दानी गर्न सुरु भएपछि केही प्रतिशत रुपैयाँ लगानीका लागि योजना बनाउन जरुरी छ । कम उमेरमा नै लगानीको सुरुवात गर्दा, त्यसबाट भविष्यमा राम्रो पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, सेयर बजारको आइपिओमा समेत लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसका साथै कुनै व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने भए त्यसको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ ।
सुरक्षाका लागि बीमा
पैसा बचत गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने अर्को राम्रो उपाय जीवन बीमा पनि हो । कम उमेरमा नै स्वास्थ्य बीमा गरियो भने तपाईले कम प्रिमियम तिर्दा पनि हुन्छ । त्यसैगरी कुनै व्यापार व्यवसाय थलानी गर्दा त्यसको बीमा गर्दा राम्रो हुन्छ ।